တစညပါတီ စုပေါင်းခေါင်းဆောင်မှု လမ်းစဉ်ဖြင့် ရှေ့ဆက်မည် ဟုဆို - Yangon Media Group
တစညပါတီ စုပေါင်းခေါင်းဆောင်မှု လမ်းစဉ်ဖြင့် ရှေ့ဆက်မည် ဟုဆို
စုပေါင်း ခေါင်းဆောင်မှုလမ်းစဉ်ဖြင့် တစညပါတီရှေ့ဆက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ယင်းပါတီဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးဟန်ရွှေက ပြောသည်။ နိုဝင်ဘာ ၄ ရက်က သာကေတ မြို့နယ်တွင် ပြုလုပ်သော တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ နှစ် ၃ဝ ပြည့်အခမ်းအနားတွင် ၎င်းကပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”တစ်ဦးကောင်းတစ်ယောက် ကောင်းချွန်ပြီး ဆောင်ရွက်လို့ရှိရင် ပါတီစည်းလုံးမှုပျက်ပြီး အာဏာရှင်စနစ်ကျင့်သုံးသွားတတ်ပါတယ်၊ တစ်ဦးချင်းစီရဲ့စွမ်းရည်ရှိရမည်ဖြစ်သကဲ့သို့ စုပေါင်းခေါင်း ဆောင်မှုဖြင့်သာ ပါတီတွင်းဒီမိုက ရေစီစနစ်ကိုကျင့်သုံးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပါတီက ၂ဝ၂ဝ ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် စု ပေါင်းခေါင်းဆောင်မှု လမ်းစဉ်နဲ့ဖွဲစည်းပြီး ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်သွားမှာပါ”ဟု ၎င်းကပြောသည်။ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်မှစ၍ ပါတီကို ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ၂ဝ၁၉ခုနှစ်ကို ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်ကာအ ဖြစ်သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်သူလူထုကို အမှန်တကယ်ကိုယ်စားပြုသော စည်းရုံးရေးဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။
ပါတီပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပြီး နောက်မြို့နယ် ၂ဝဝ ကျော်တွင် ရုံးခွဲများဖွင့်လှစ်ထားပြီး ကျေးရွာ၊ ရပ်ကွက်များတွင် ရုံးခွဲပေါင်း ၉ဝဝဝ ခန့် ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ထား ပြီးဖြစ်ကာ ပါတီဝင်အင်အား ၄ဝဝဝဝဝ နီးပါးရှိပြီဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။ ”စည်းရုံးရင်းဖွဲ့စည်း၊ ဖွဲ့စည်း ရင်း စည်းရုံးဆိုတဲ့စနစ်နဲ့လည်း ဆောင်ရွက်နေပါတယ်”ဟု တစညပါတီအမျိုးသမီးရေးရာ ကော်မတီ ဝင် ဒေါ်သက်သက်ဆွေကပြောသည်။ လက်ရှိပါတီအနေဖြင့် ငြိမ်း ချမ်းရေးဖြစ်စဉ်များတွင် အင်တိုက်အားတိုက် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားရန်နှင့် ရခိုင်အရေးတွင် တိုင်းရင်းသားများဘက်မှ ပြတ် ပြတ်သားသား ရပ်တည်သွားမည်ဟု ယင်းအခမ်းအနားတွင် ထုတ် ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
၂ဝ၁၈ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် NLD က ခုနစ်နေရာ၊ USDP က သုံးနေရာ၊ SNLD က တစ်နေရာ၊ CLD က တစ်နေရာ၊ တစ်သီးပု??
အိပ်မောကျနေတဲ့ ဂန်းနားတွေကို ခြောက်လအတွင်း လှုပ်နှိုးခဲ့သူ
အိန္ဒိယ၀န်ကြီးချုပ်ပြောကြားခဲ့သည့် ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ယနေ့အထိ ခံစားခ??
ပင်လယ်ပြင်အတွင်း မျောပါနေသည့် ရွှေ့ပြောင်းလာသူ ၃၆ဝ ကျော်ကို မော်ရိုကို ကယ်တင်ထားရ
အမျိုးသားရေး တပ်ပေါင်းစု(ရန်ကုန်)၏ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲတွင် ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်
မကွေး၌ FDA မူနှင့် မကိုက်ညီသည့် ရေသန့်စက်ရုံ ၃ဝ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ရှိဟုဆို